Ngenzenjani Uma Abantu Behleba Ngami? | Intsha Iyabuza
ULIMI Hindi (Roman) ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Arabhu (SaseLebanon) Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iban Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Osset Isi-Ukraine Isi-Umbundu IsiBemba IsiBhunu IsiBislama IsiBulgaria IsiCambodia IsiCebuano IsiChewa IsiCreole SaseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFiji IsiFinishi IsiFulentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreki IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKachin IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMalta IsiMyanmar IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiNzema IsiPedi IsiPolishi IsiPunjabi IsiPutukezi IsiPutukezi (SasePortugal) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSunda IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiTurkmen IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu ULimi Lwezandla LwaseBrazil
Isizathu sokuba ilimaze
Izindaba ezimbi—inhlebo ngeke ukwazi ukuyivimbela ngaso sonke isikhathi
Izindaba ezinhle—inhlebo akufanele ikulimaze
Uthola ukuthi umngane wakho uye wasakaza inhlebo ngawe. Kulula kangakanani kuwe ukuvele ungakunaki okwenzekile?
Uthola ukuthi umngane wakho uye wasakaza inhlebo ngawe. Kulula kangakanani kuwe ukuya kuye (ngomoya ozolile) nixoxe ngokwenzekile?
Uthola ukuthi umngane wakho uye wasakaza inhlebo ngawe—kodwa kunezindaba ezithakazelisayo kodwa ezingezinhle nawe ozaziyo ngaye. Kulula kangakanani ngawe ukuba ukungaziphindiseleli ngokukhuluma ngazo?
Uma impendulo yakho iwukuthi “kunzima” noma “ngeke ngikwazi” kunoma imuphi kule mibuzo, lesi sihloko sizokusiza uthole izindlela ezingcono zokusingatha inhlebo.
Enye inhlebo iyalimaza—ngokwesibonelo, ingamanga ahloselwe ukucekela phansi idumela lakho. Kodwa ngisho noma inhlebo ingeyimbi kangako, isengakuzwisa ubuhlungu—ikakhulukazi uma isakazwa umuntu obucabanga ukuthi usondelene kakhulu nawe!—IHubo 55:12-14.
“Ngathola ukuthi umngane wami wayengihleba, ethi anginandaba nabanye abantu. Kuyalimaza ngempela lokho! Angiqondi ukuthi yini eyamemza wakhuluma kanje.”—U-Ashley.
Iqiniso: Kungakhathaliseki ukuthi umuntu osakaza inhlebo ngawe ungumngane wakho oseduze noma cha, akumnandi ukuzwa ukuthi abanye abantu bakhuluma kabi ngawe.
Kunezizathu eziningana ezingenza abantu bahlebe, ezihlanganisa lezi:
Ukukhathalela okuqotho. Abantu bayizidalwa ezinobungane. Ngakho-ke, kungokwemvelo ukuthi siyakhuluma nabanye futhi siyakhuluma nangabo. Empeleni, iBhayibheli lisikhuthaza ukuba ‘sibakhathalele abanye.’—Filipi 2:4.
“Ukukhuluma ngabantu kuhlala kuyinto ejabulisayo!”—UBianca.
“Kumelwe ngivume ukuthi ngiyathanda ukwazi ukuthi kwenzekani kwabanye abantu nokukhuluma ngakho nabanye. Angazi ukuthi kubangelwa yini—kumane nje kumnandi.”—UKatie.
Isizungu. Ngezikhathi zeBhayibheli, abanye abantu “babechitha isikhathi sabo esikhululekile bengenzi lutho ngaphandle kokuxoxa noma ukulalela okuthile okusha.” (IzEnzo 17:21) Kusenjalo nanamuhla!
“Ngezinye izikhathi uma kungekho senzakalo esithakazelisayo abantu abangaxoxa ngaso, bavele baqambe eyabo indaba.”—UJoanna.
Ukuzenyeza. Ngesizathu esihle, iBhayibheli lixwayisa ngokuthambekela kokuziqhathanisa nabanye. (Galathiya 6:4) Ngeshwa, abanye abantu bazama ukunqoba ukuzenyeza ngokusakaza inhlebo elimazayo ngabanye.
“Ukukhuluma kabi ngabanye ngokuvamile kusho okuthile ngalezo zinhlebi. Ngokuvamile kusho ukuthi ekujuleni kwezinhliziyo zazo zinomona ngomuntu ezimhlebayo. Zisakaza amahemuhemu ukuze zizizwe zingcono, ziziduduze ngokuthi zingcono kunalowo muntu.”—UPhil.
Iqiniso: Sithanda singathandi, abantu bazoqhubeka bekhuluma ngabanye abantu—kuhlanganise nawe.
Cishe ngeke ukwazi ukugwema zonke izinto ezikhulunywa ngawe, kodwa ungakwazi ukunquma ukuthi uzozisingatha kanjani. Uma uthola ukuthi kukhona abahleba ngawe, kunezinto okungenani ezimbili ongazenza.
EYOKUQALA: Ukuvele ungazihluphi. Ngokuvamile, ikhambi elingcono liwukuvele ungazihluphi—ikakhulukazi uma lawo mahemuhemu engenangqondo. Sebenzisa iseluleko seBhayibheli esithi: “Ungasheshi ukucasuka emoyeni wakho.”—UmShumayeli 7:9.
“Kwake kwaba namahemuhemu okuthi ngithandana nomfana othile—umuntu engangingakaze ngimbone nokumbona! Kwazwakala kuyihlaya futhi ngavele ngahleka.”—U-Elise.
“Ukuba nedumela elihle kuyisivikelo esingcono lapho uhletshwa. Ngisho noma bekhuluma kabi ngegama lakho, uma unedumela elihle, bambalwa abantu abayokukholwa lokho okushiwoyo. Iqiniso ngalokho oyikho yilona eliyonqoba.”—U-Allison.
Icebiso: (1) Kubhale phansi lokho okwakhulunywa ngawe nokuthi (2) kwakwenza wazizwa kanjani. Lapho ‘usukhulumile ngenhliziyo,’ ungase ukuthole kulula ukukudlulisa.—IHubo 4:4.
EYESIBILI: Khuluma nomuntu oqale le nhlebo. Kwezinye izimo, ungase ube nomuzwa wokuthi la mahemuhemu mabi kangangokuba nakanjani kufanele ukhulume nomuntu owaqalile.
“Uma uthatha isinyathelo sokhuluma nabantu abakuhlebayo, bangase bafunde ukuthi izinto abazishoyo ngabanye zigcina zifikile ezindlebeni zabo. Ungakwazi nokugeza igama lakho futhi mhlawumbe nenkinga ixazululeke.”—U-Elise.
Ngaphambi kokuba uye kumuntu okuhlebile, cabangela lezi zimiso zeBhayibheli ezilandelayo, bese uzibuza le mibuzo ehambisana nazo.
“Lapho umuntu ephendula indaba ngaphambi kokuba ayizwe, lokho kungubuwula kuye nokululazeka.” (IzAga 18:13) ‘Ingabe nginawo wonke amaqiniso? Kungenzeka yini ukuthi umuntu ongitshele ngale nhlebo akakuzwanga kahle lokho okushiwo?’
‘Shesha ukuzwa, wephuze ukukhuluma, wephuze ukuthukuthela.’ (Jakobe 1:19) ‘Ingabe lesi isikhathi esifanele sokukhuluma nomuntu ongihlebile? Ingabe ngiyaqiniseka ukuthi le ndaba ngihlose ukuyisingatha ngendlela efanele? Ingabe kuzoba ngcono ngilinde isikhashana kuze kwehle intukuthelo?’
“Phatha abanye ngendlela obungathanda bakuphathe ngayo nawe.” (Mathewu 7:12, NET Bible) ‘Ukube bekuyimi osephutheni, bengingathanda kukhulunywe kanjani nami? Bengingakhetha ukuba le nkinga ixazululwe kanjani? Imaphi amagama nesimo sobuso esingaba nomphumela omuhle?’
Icebiso: Ngaphambi kokuba uyokhuluma nomuntu okuhlebile, kubhale phansi lokho ohlose ukukusho. Ngemva kwalokho, linda kuze kudlule isonto elilodwa noma amabili, bese uphinda ukufunda lokho owakubhala ukuze ubone ukuthi kukhona yini ofuna ukukushintsha. Okunye ongakwenza, xoxa nomzali wakho noma nomngane ovuthiwe ngalokho okuhlelile, bese ucela neseluleko sakhe.
Iqiniso: Njengoba nje kunjalo nangezinye izinto ekuphileni, inhlebo yinto ongeke ukwazi ukuyilawula ngaso sonke isikhathi. Kodwa lokho akusho ukuthi kufanele yona ilawule wena!
“Enye inhlebo imane nje iwubuwula, kuyilapho enye iyimbi ngempela. Uma kumane kuwubuwula nje, vele uyidlulise. Kodwa uma kungamahemuhemu amabi ngempela—angonakalisa idumela lakho—kungase kudingeke ukhulume nomuntu owaqalile.”—UBrianna.
“Uma abantu bekuhleba, ungaziphindiseleli ngokubahleba noma ngokusho izinto ezimbi ngabo. Uma wenzenjalo, uba yinhlebi nawe.”—U-Olivia.
Ngingayigwema Kanjani Inhlebo?
Noma nini lapho inkulumo elimazayo ingena engxoxweni, thatha isinyathelo ngokushesha!
Thumelela Thumelela Ngenzenjani Uma Abantu Behleba Ngami?